ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အမေရိကန်နိုင်ငံရာက် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ကုို နယူးယောက် မြန်မာများ ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
အမေရိကန်နိုင်ငံရာက် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ကုို နယူးယောက် မြန်မာများ ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
တနင်္သာရီတိုင်း ၊ ရတနာသဘာဝဓါတ်ငွေ.ပိုက်လိုင်း
(ထားဝယ်) မှ ယိုးဒယားကို နှစ်စဉ် ဓါတ်ငွေ. $ ဒေါ်လာသန်း နှစ်ထောင် ကျော် ရောင်းနေပေမယ်.
ထားဝယ်မြို.ကပြည်သူလူထု မှာတော. လျှပ်စစ် မီတာခ
၁ ယူနစ် ၅၀၀ ကျပ် ပေးနေရတယ် ။
သမတကြီး ......... ကြည်. မနေသင်.ပါဘူး